Wararka - Sida Loogu Hormariyo Khibrada Isticmaalaha Websaydhkaaga E-Ganacsiga
Sida Loogu Hormariyo Khibrada Isticmaalaha Websaydhkaaga E-Commerce
Marka ay timaaddo websaydhkaaga elektaroonigga ah, bixinta khibrad adeegsi oo wanaagsan (UX) waxay qaadataa wax ka badan oo kaliya naqshad quruxsan.
Waxay ku lug leedahay dhowr qaybood, dhammaantoodna wada shaqeynaya, si ay uga caawiso dadka u socdaalaya barta inay ku wareegaan oo ay helaan waxa ay raadinayaan. Faahfaahinta alaabada illaa qaab dhismeedka websaydhka, mid kasta oo ka mid ah astaamahan waa in lagu fiicnaadaa iyadoo UX tayo leh maskaxda lagu hayo.
Diyaar ma u tahay inaad waxbadan barato? Hadday sidaas tahay, sii wad akhriska.
Ku hagitaan martidaada alaab shaqsiyeed ama talo soo jeedin
Talooyinka wax soo saarka ee shakhsi ahaaneed, waxaad ku hagi kartaa isticmaaleyaashaada alaabada ugu fiican oo aad ka caawin kartaa inay soo helaan kuwa cusub.
Tani waxay gacan ka geysan doontaa kordhinta iskucelceliska dalabkooda iyo abuurista UX wanaagsan. Tani waxay la mid tahay yeelashada qof macaamil shakhsi ah oo macaamiisha siiya soo-jeedinta wax soo saarka.
Marka lagu daro bixinta talooyinka, waxaad sidoo kale abuuri kartaa qaybaha "isbeddellada" ama "iibiyaha ugu fiican". Kuwani waxay u shaqeyn doonaan si ka wanaagsan mahadnaqa caddaynta bulshada ee ay bixiyaan. Waxay kaloo macaamiisha ka dhigeysaa inay aaminaan in haddii dad kale ay helayaan alaabtaan, inay fikrad fiican tahay sabab - kuwani waxay ku jiri karaan waxyaabaha ugu fiican ee la iibsado. Qof kastaa wuxuu rabaa inuu qayb ka noqdo isbeddellada ugu dambeeyay.
Hab kale oo loo adeegsado talooyinka ayaa ah iyadoo la iibinayo ama la isweydaarsanayo alaabada. Markaad iibiso, waxaad tusi kartaa dadka booqanaya boggagaaga sida alaabada tayada sare leh.
Iibinta iskutallaabta, waxaad soo bandhigi kartaa badeecooyin dhameystiran oo kaa caawin doona inaad sare u qaaddo khibradaada guud ee wax soo saarka.
Abuur Fudud Si Loogu Dhoofo loona Abaabulo Website
Kaliya qiyaasi hadaad gasho dukaanka alaabada guriga si aad u ogaato in wax waliba isku dhafan yihiin oo uusan jirin wax kala dambayn ah.
Sideed dareemi lahayd? Lumay, xanaaqsan, wareersan? Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda booqdayaasha bogga elektaroonigga ah haddii marin haynta bartaadu ay tahay subpar. Waqti badan ayey ku qaadan doontaa inay soo helaan alaabada ay rabaan, waxayna ku adkeyneysaa inay helaan kuwo cusub
Waxa aad layaabi karto, in kastoo, maxay tahay marin-u-helidda websaydhku wanaagsan? Tani runti waxay kuxirantahay qofka macmiilkaagu yahay iyo sida ay wax u dukaameystaan. Tani waa waxa go'aamin doona kala soocida alaabada aad isticmaaleyso, qeybaha aad isticmaasho, iyo waxa aad ku muujineyso meenuga weyn. In kasta oo tani run tahay, waxaa jira habab yar oo ugu wanaagsan oo aad u isticmaali karto si aad uga caawiso hagaajinta UX.
Tallaabada ugu horreysa waa in la doorto qaybaha ugu sarreeya. Haddii aad iibineyso alaabada dumarka iyo ragga, kuwani waxay noqonayaan qeybaha lagu muujiyey dusha sare, oo ay weheliyaan alaabada qaybta sare.
Dhaqan kale oo fiican ayaa ah isticmaalka miirayaasha. Kuwaani waxay ka caawin doonaan qof inuu helo alaabada uu doonayo. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah cabbirka, midabka, qiimaha, iyo qaybta. Shaandheeyeyaashani waxay gacan ka geysan karaan sidii loo badbaadin lahaa baaraha wakhti badan oo hawsha dukaamaysigana looga dhigi lahaa mid fudud oo raaxo badan.
Tani waxay noqon kartaa wax kooxdaada maamulka shabakadda IT-ga ay kaa caawin karto.
Weydiiso oo Dhageyso Jawaab celinta Macaamiisha
Xitaa haddii aad raacdo dhammaan hababka ugu fiican, had iyo jeer waxaa jiri doona wax aad si fiican u qaban karto.
Tani waa sababta ay muhiim u tahay inaad raadsato jawaab celinta macaamiisha. Tani waxay ku ogeysiineysaa meelaha u baahan hagaajinta iyo waxa kaa caawin doona inaad sameyso isbeddellada saxda ah. Xaaladaha qaarkood, macaamiisha ayaa ku siin kara talo soo jeedin meelaha la doonayo in la hagaajiyo, taas oo kaa caawin doonta inaad waqtiga ka badbaadiso wixii ku saabsan waxa la sameeyo ama la beddelo.
Waxaa jira dhowr qaybood oo gala xaqiijinta geedi socodka jawaab celinta guuleysta. Mid ka mid ah kuwan waa otomaatiga. Waad otomatayn kartaa codsigaaga jawaab celinta e-mayl si aad u baxdo ka dib marka uu qof wax iibsado markii ugu horreysay ama ka dib markii xaddi cayiman ay dhaaftay. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad hubiso joogtaynta oo waxay kuu oggolaan doontaa inaad miisaamto hawshan.
Haddii aadan isticmaalin otomaatiga, waa inaad midba mar u dirtaa emaylladan, markii aad xusuusan karto. Tani waa hawl aan waxtar lahayn oo waqti lumis ah.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la siiyo dhiirigelin macmiil kasta oo bixiya jawaab celin. Tani waxay noqon kartaa hadiyad bilaash ah ama qiimo dhimis. Tani waa hab fiican oo lagu dhiirrigeliyo dad badan inay kuu sheegaan waxay aaminsan yihiin. Waxaa jira barnaamijyo dhowr ah oo aad isticmaali karto si ay kaaga caawiyaan fududeynta howshan iyo inay kaa caawiyaan inaad la socoto natiijooyinka, taas oo lagu dhex dari karo qaar ka mid ah meheradaha ugu caansan ee ganacsiga e-commerce, oo ay ku jiraan Shopify.
Ka dib markaad ururiso dhammaan jawaab celinta, waxaad soo bandhigi kartaa soo jeedimaha iyo macluumaadka hoosta alaabada ama qaybaha kala duwan ee goobta. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad kalsooni badan ka hesho martida cusub.
Haddii aad hesho jawaab celin liidata, hubi inaad la socoto macmiilka aan ku qanacsanayn si aad ugu wargeliso in arrintooda wax laga qabanayo.
Sii Kaydinta Ikhtiyaarka Liistada Rabitaanka
Mararka qaarkood, in wax lagu daro gaadhigu waxay noqon kartaa ballanqaadka dukaamaysiga internetka.
In kasta oo laga yaabo inay wax rabaan, waxay sidoo kale rabi karaan inay sii wadaan daalacashada alaabooyin kala duwan si ay u barbar dhigaan. Ama, waxaa laga yaabaa inaysan hubin wax oo ay doonayaan inay u keydiyaan inay iibsadaan waqti kale.
Sabab kasta ha noqotee, bixinta ikhtiyaarka liiska xulashada ee macaamilka si loo badbaadiyo sheyga ayaa ah hab fiican oo lagu yareeyo cadaadiska la socda in wax la dhigo gaadhiga.
Haddii aadan bixin ikhtiyaarkan, iibsadayaashu waa inay xusuusnaadaan waxa ay jecel yihiin ka dibna isku dayaan inay mar kale helaan waqti kale. Tani waxay keenaysaa shaqo badan oo macaamiisha ah waxayna yareyneysaa guud ahaan UX. Sidoo kale, markaad fuliso kaydinta liiska xulashada liiska, waxaad haysataa macluumaadka isticmaalaha.
Mar alla markay riixaan batoonkan, waxaad u qaadan kartaa foom diiwaangelin fudud ah si loo hubiyo in xulashadooda la keydiyay.
Ma Isticmaalaha Goobta E-Ganacsigaaga Saaxiibtinimo?
Tani waa wax ay tahay in milkiile kasta oo degel ahi tixgeliyo. Hadday jawaabtu tahay “maya,” markaa waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan in wax laga beddelo.
Sameynta sidaas waxay u horseedi doontaa macaamiisha faraxsan iyo, natiijada, beddelaad badan. Hubso inaad tan maskaxda ku hayso oo aad u isticmaasho talooyinka kor ku xusan natiijooyinka ugu fiican.
Waqtiga boostada: Aug-28-2020